बच्चा पढाईमा मन गर्दैन के गर्ने ? – Enayanepal.com
बच्चा पढाईमा मन गर्दैन के गर्ने ?
अहिलेका बालबालिकाले धेरै सेवा सुविधा पाएका छन् । उनीहरुलाई पढ्नका लागि कुनै दुःख छैन । न टाढा धाउनुपर्छ, न पाठ्य सामग्रीको अभाव नै झेल्नुपर्छ । सबैकुरा आमाबुवाले व्यवस्थित गरिदिएका छन् । विद्यालय आउन, जान, पढ्नका लागि उनीहरुलाई कुनै समस्या छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरु पढाईमा भन्दा अन्यत्र ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । अक्सर बालबालिका मनोरञ्जनमा बढी लिप्त हुन थालेका छन् । त्यसम ाथि अहिले मोबाइलले उनीहरुको बानी बिगारेको छ । हरक्षण उनीहरुक ा े ध्यान मा ेबा इलमा हुन्छ ।
कति बेला विद्यालयबाट र्फकने र मोवाइल खेलाउने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । क तिबेला होमवर्क सक्ने र मोवाइल खेलाउने भन्ने ध्यान्नमा हुन्छन् । मोवाइल, ट्याब, ल्यापटप, टेलिभिजन आदिमा उनीहरु धेरैजसो समय खर्च गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये पनि मोबाइल प्रतिको आशक्ति अरु बढी देखिन्छ ।
उनीहरु मोबाइल पाएपछि दुनियाँ भुलेर त्यसमै लिप्त हुने गरेका छन् । उनीहरु मोवाइलमा भिडियो हेर्ने, गेम खेल्ने गर्छन् । मोवाइलको गेम एवं भिडियोको ह्याङओभरबाट बाहिर आउन उनीहरुलाई निकै समय लाग्छ ।
पढ्दा, खाँदा, होमवर्क गर्दा समेत उनीहरु मोवाइल गेमप्रति नै ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । कतिपय बालबालिका त यस्ता छन्, जो मोबाइल बिना खाना खाँदैनन् । उनीहरुलाई मोबाइलमा भिडियो देखाइदिएपछि वा गीत सुनाइदिएपछि मात्र खाना खान थाल्छन् । यसरी पछिल्लो समय उपलब्ध उपकरणले अहिलेका बालबालिकाको पढाईमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।
यसरी पढाईबाट बिथोलिदै गरेका बालबालिकालाई कसरी सही ठाउँमा ल्याउने त ? मोबाइल, टिभीको समय निश्चित गरौं बालब ालिक ाला ई मा ेब ाइल, टेलिभिजनबाट बञ्चित गर्दैमा पढाईमा सुधार हुन्छ भन्ने चाहि पक्कै होइन । अहिलेको युगमा यी प्रविधिबाट उनीहरुलाई अलग गर्न पनि सकिदैन । त्यसैले पढाईका साथसाथै बेलामौकामा उनीहरुलाई मोबाइल खेलाउन, टेलिभिजन हेर्न दिनुपर्छ ।
यद्यपि यसका लागि समय निर्धारण गर्न सकिन्छ । विद्यालयबाट फर्केपछिको केही समय उनीहरुलाई यी कुरामा छुट दिन सकिन्छ । यसले गर्दा उनीहरु फ्रेस पनि हुन्छन् । एकोहोरो पढाईमा केन्द्रित गरिरहँदा पनि उनीहरुलाई दिक्क ला ग्न सक्छ । बेलामौक ामा मनोरञ्जनको खाँचो हुन्छ । अतः उनीहरुलाई विद्यालयबाट फर्केको केही समय मोबाइल, टेलिभिजन आदिमा रमाउन दिन सकिन्छ ।
यद्यपि यसका लागि समय निश्चित गर्नुपर्छ । सुरुमा नै उनीहरुलाई कति समयका लागि खेल्न दिइएको भनेर जानकारी गराउनुपर्छ । पढाईंका लागि सही स्थान छनौट बालबालिकाहरु चञ्चल हुन्छन् ।
उनीहरुक ा े ध्यान आसपासक ा े वातावरणले पनि तानिरहेको हुन्छ । पढिरहेको बेला समेत उनीहरु आफ्नो वरीपरी भइरहेको गतिबिधिमा ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा पढाईमा सम्पूर्ण ध्यान जाँदैन । अतः उनीहरुलाई यस्तो स्थानमा पढ्ने व्यस्था गरिदिनुपर्छ, जहाँ शान्त होस् । पढाईबाट ध्यान भड्कने कुनैपनि सामाग्री नहोस् । संभव भएसम्म बालबालिकालाई पढ्नका लागि छुटै कोठाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सहर पढ्ने विद्यार्थी गाउँ केन्द्रित, गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्यो
शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेश समिति घोषणा
छात्रवृत्तिको रकम प्रधानाध्यापकद्वारा हिनामिनाको आरोप, अभिभावकले जवाफ खोज्दा बैठकमै अनुपस्थित
विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी
एमयू र हपेईबीच सम्झौता